पर्यटनका डायनामिक व्यक्तित्व : भवि शर्मा
प्रकाशित मिति: 2017/04/18
भवि शर्मा –महासचिव, ठमेल पर्यटन विकास परिषद् (टीटीडीसी)
नेपालकै प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्य हो ठमेल । नेपाल आउने पर्यटकहरुको पहिलो बसाईको रुपमा ठमेल रहने गरेपनि पर्यटकीय पूर्वाधार, ढल, बाटो, ट्राफिक व्यावस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसमा ठमेलको बिकासका लागि भनेर स्थापना भएका बिकासे संस्थाहरुको भुमिका पनि राजनीतिक लाभहानीमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रबृति देखिएको छ ।
ठमेलको बिकासमा सरोकार राख्ने बिकासे संस्था र ठमेल बिकासमा उनीहरुको पहलका बारेमा बुझ्ने कोशिस गरेका छौ । प्रश्तुत छ, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का महासचिव भवि शर्मा सँगका केही सवाल ।
ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्ले बर्तमान कार्यसमितिले के गरिरहेको छ ?
ठमेलको बिकासमा तिव्र गतिमा लागि परेका छौ । ढलसमस्या समाधानका लागि बाटो खन्ने काम भैरहेको छ, सँगै बैकल्पीक मार्गहरु पनि सुधार गरिरहेका छौ । १५ दिनभित्र सक्ने गरी दु्रत रुपमा ढलको काम भईरहेको छ । यस्तै सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र ठमेलभित्रका प्रत्येक बाटोमा पिच गर्ने काम भैरहेको छ । अबको डेढ महिना भित्रमा पिच गर्ने कार्य समाप्त हुनेछ, यस्तै ट्राफिक व्यावस्थापन, सडकमा छरपस्ट बिजुलीका तार तथा होर्डिङ बोर्ड हटाउने लगायतका काम तिब्र गतिमा भैरहेको अवस्था छ ।
तपाई ठमेलका सम्पुर्ण समस्या समाधान भए भन्नुहुन्छ, हिजोका दिनमा ढल फुट्ता रमितेहरुको भिड र बाटोको अस्तव्यस्तता अझै ताजै छ, कसरी बिश्वास गर्ने ?
हेर्नुस, यो एकैचोटी हुने कुरा होईन, हिजो समस्या थियो, त्यसैले समाधान अहिले खोजिएको हो । बाटोका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखी, ढल नलीको निर्माण र अव्यवस्थीत पार्किङ व्यावस्थापन गर्ने कार्यमा हामी दु्रत गतिमा लागिपरेका छौ । तपाई ठमेल क्षेत्रमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, बिकासले बाटो लिईसकेको छ ।
अघिल्लो कार्यसमिति भन्दा उत्पातै राम्रो गर्यौ भन्ने हो ?
तपाई ठमेलमा आएर प्रत्येक व्यावसायीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हिजोका दिनमा ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्ले के गर्यो र अहिले हामीले के गर्दैछौ भन्ने कुरा । हाम्रो कार्यसमिती आएको भर्खर २ महिनामात्र भएको छ, तर कार्यसमितीमा आएदेखी नै ठमेलको बिकासमा हाम्रो सक्रियता छ, जुन प्रष्ट रुपमा देख्नसक्नुहुन्छ ।
ठमेल बिकास सन्दर्भमा हचुवाको भरमा आफुखुसी निर्णय गरेर होईन, बर्तमान आवश्यक्तालाई ध्यान दिदै अगाडि बढेका छौ । यसमा व्यवस्थापकिय सुधारका पाटो र बिकासका पाटो सँगसँगै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । ट्रापिक, सडकबालबालिका, हकर र तेस्रो लिङ्गी ठमेलका बर्षौका समस्या थिए, अहिले करिब सबै क्षेत्रमा सुधारको अवस्था देखिसकेको छ ।
ट्राफिक जामकै कारण हिजोका दिनमा सञ्चयकोष भवनदेखी सोह्खुट्टे पुग्न आधाघण्टा लाग्थ्यो अहिले २ मिनेटमा पुग्नुहुन्छ, कुनै रोकावट छैन, सडक बालबालिका एकाध बाहेक समस्या निराकरण भैसकेको छ, हकरहरुले फलानो डिस्को र बारमा चिनेको छु, यस्तो उस्तो छुट रमाईलो आदीईत्यादीका कुरामा पर्यटकलाई अनावश्यक दबाब दिने छुट अब कसैलाई छैन ।
यस्तै अब कुनै पनि पर्यटकलाई साँझपख बाटो कुरेर हात समाएर जाउँ भन्ने समलिङ्गी पाउनु हुनेछैन । तिनीहरुलाई ठमेलका गल्लीबाट त्यस अवस्थामा बिस्थापित गरिसकेका छौ भने, अब भन्नुस सुधार हामीले गरेका छौ भनेर भन्ने की नभन्ने ।
बिकासकै पाटो हेर्नुहुन्छ भनेपनि ढल समस्या दिर्घकालिन समाधान खोज्दै गर्दा बाटो खन्ने काम भैरहेको छ, दु्रतगतिमा काम भैरहेकै कारण कतिपय ठाँउमा बाटो अवरोध भएको पनि होला, यसलाई १५ दिनभित्र टुग्याउने कार्ययोजना छ, बाटाका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, धमाधम पिच गर्ने बिजुलीका तार व्यावस्थापन लगायतका सबै समस्यामा हामी केन्द्रीत छौ भने बिकासको परिभाषा यो भन्दा अन्यन्त्र खोज्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । जुन कुरामा हाम्रो नेतृत्व गम्भिर छ, हामी गम्भिर छौ ।
त्यसो हो भने ठमेलको बिकासमा अघिल्लो कार्यसमितीले काम गरेन भन्ने हो ?
त्यो छर्लङ् छ, मैले भनिरहनु पर्दैन, यद्यपी ईच्छाशक्ति भएमा गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । अवरोधहरु जुनसुकै कार्यसमिती निर्माण हुँदा पनि हुने गर्दछन । यद्यपी हामी सबै जना आफ्नो व्यावसायमा भन्दा बढि ठमेलको बिकासमा केन्द्रित भईरहेको अवस्था हो । यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो कार्यशैली सम्पुर्ण रुपमा ठमेल संस्कृतिलाई जोगाउनु र समुन्नत बनाउनुमा केन्द्रित रहनेछ ।
तर ठमेलमा रात्रिकालिन व्यवसायका नाममा सरकारसँग वार्गेनिङ गरिरहने र त्यसको सदुपयोग भन्दा पनि सामाजिक बिकृती मौलाउँदो छ, अनी ?
जुनसुकै बिकसित समाजमा पनि बिकृतीहरु हुन्छन, यो नौलो होईन । ठमेललाई पनि रंगिन पर्यटकीय समाजभित्रको संस्कृतिका रुपमा बुझ्ने हो भने यसमा समस्याहरु हुन सक्दछन । यद्यपी यहाँ ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा के भने कुनै पनि समाज र संस्कृतिको अनुगमन गर्ने र समाज अनुकुल बनाउने काम सरकारको हो, यसमा राज्यको भुमिका स्पष्ट देखिएको छैन, देखिनुपर्छ । नत्र ठमेलमा बिकृती बढ्यो भनेर चिच्याई मात्र रहने हो भने यसभित्रका कैयन सभ्य संस्कृतिहरु लोप भएर जान्छन , यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।
अर्कोकुरा पर्यटकीय केन्द्र हुनुको नाताले हरेक पर्यटक खान, घुम्नको लागि मात्र ठमेल आउँछन भनेर सोच्नु गलत हुन्छ, यस्तोमा अन्य आवश्यक्ता र ईच्छाका कुराहरु पनि जोडिन आउँदा कहीँकतै बेश्याबृत्तिका नामहरुपनि जोडिन सक्छन, यसलाई अन्यथा लिनु आवश्यक छैन । त्यस्तो प्रबृत्ति देखियो भनेर सिंगो क्षेत्रलाई आरोप नलगाउँ ।
तपाईको अर्थ शारिरिक सम्बन्ध राख्न चाहनेले पाउनुपर्छ, भन्ने हो ?
होईन । कुनैपनि देशको आफ्ना बिशिष्टीकृत संस्कृति हरु हुन्छन । बिश्वका थुप्रै सहरहरु खास क्षेत्रका लागि कहलिएका छन, त्यस मध्येमा सेक्स संस्कृति पनि पर्छ ।
ठमेल बिश्व पर्यटकहरुसँग सिधा जोडिने भएपनि हाम्रो समाजले अझैपनि खुल्लारुपमा यौन व्यावसायलाई पचाईसकेको छैन । यदि त्यसो हो भने हामीले यि कुरालाई खुलस्त रुपमा ईन्कार गर्नसक्नुपर्दछ । यस्तोमा कुनै पर्यटकको चाहना उसले भनेबमोजिमकै अर्थमा पुरा हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन, यसमा राज्यको उपस्थीति देखिनुपर्छ, केवल ठमेललाई गाली गरेर बस्न मिल्दैन । यसले कसैको हित गर्दैन । त्यसको सट्टामा कला र संस्कृतिलाई पर्यटन प्रोडक्टको रुपमा प्रश्तुत गर्न सकिन्छ । जे हो त्यो स्पष्ट भनौ राज्य र व्यवसायी कसैले पनि द्धैध चरित्र नदेखाउँ, यसैमा हाम्रो पहिचान छ ।
तपाई यसो भन्नुहुन्छ, तर बाहिर मसाजका बोर्ड राखेर भित्र यौनधन्दा चलाउने पनि हुँदा रहेछन, यहाँहरुको ध्यान कता गयो कुन्नी ?
होलान । तर यहाँले भनेजस्तै बाहिर जे स्वरुपमा परिचय गराईएको हुन्छ, सामान्य ग्राहकले त्यही रुपमा बुझ्नु उसको बाध्यता हो । यद्यपी सबै ठाँउमा त्यस्तै छ भनेर भन्नु ठमेललाई बद्नाम गराउनु हो । राज्यले अनुगमन गरेर कारबाही गरोस, हामी सहयोग गर्न तयार छौ । कुनै व्यावसायीले गलत गर्यो भनेर ईमान्दारप्रति खोट देखाउनु न्यायोचित नहोला । यसैमा राज्य स्पष्ट हुनुपर्यो भन्ने भनाई हो ।
पर्यटन सुचना केन्द्र निर्माण भनेर बहुतै हल्ला गर्नुभयो, अब नचाहिने हो कि, किन वास्ता नभएको
आवश्यक्ता छ, यसमा हामी गम्भीर छौ । यद्यपी अहिले हाम्रो सम्पुर्ण ध्यान ढल,बाटो, ट्राफिक व्यावस्थापन लगायतका बिषयमा केन्द्रित भैरहेको अवस्था हो । यहाँले भनेजस्तै केही समय ढिला भईसक्यो, यद्यपी हाम्रो कार्यसमिती पनि भर्खरै मात्र आएको हो । यस्तोमा हाम्रै कार्यकालमा बढिमा २ बर्षभित्र यहाँले व्यवस्थीत सुचना केन्द्र प्राप्त गर्नुहुनेछ । त्यसबेलासम्म धैर्य गरौ ।
अबको कार्ययोजना के छ ?
कम्तिमा ठमेलमा हिड्दा सडकमा धुलो नउडोस, त्यसका लागि सडक स्तरउन्नती भैरहेको छ । शहर कुरुप बनाउने जुनसुकै होर्डिङ बोड, बिजुलीका तार हटाउने काम भैररहेको छ, अझै जारी छ । यही भन्न चाहन्छु , हिजो हेरेर आज गर्ब गर्न सक्ने स्थीतिका लागि हामी लागि परेका छौ ।